Ny akanjon'ny lamaody vehivavy 2018 - loko, lava, fohy, hoditra, lohataona, demi-sezon, rovitra, mainty, beige, akanjo inona?
Fangatahana lamaody - sary 42 sarimihetsika sarobidy ho an'ny tsirony rehetra
Ny lohataona dia efa eny an-joron-trano, ka amin'izao fotoana izao dia mendrika hikarakarana ny lobaka lamaody izay hanampy amin'ny fanamafisana ny vehivavy sy ny fanatsarana rehetra ao anatin'ity vanim-potoana mamelombelona ity, nefa koa mijanona ho fampihetseham-po sy marefo. Hatramin'izao, manamboatra vahaolana tsara tarehy ireo mpahaikanto. Ny iray amin'ireo malaza indrindra dia lasa lamaody lamaody.
Ny ranomason'ny vehivavy amin'ny lohataona 2018
Ao amin'ireo fanangonana vaovao ivelan'ny vanim-potoana, ny akanjo ivelany ivelany dia feno ny hevitra manintona indrindra sy mahagaga. Ny Stylists dia manolotra endrika hafa sy ny tsimok'izy ireo ao anatin'ny vokatra iray. Misy karazany maromaro no aseho ary misy palette isan-karazany, izay isaky ny fashionista tsirairay dia afaka misafidy safidy manintona sy mahafinaritra ho an'ny sary manokana na zavatra iray manerantany ho an'ny andro tsirairay. Andeha isika hamerina hijery ny akanjon'ny lamaody lamaody 2018:
Trendy volom-boanjo . Ny fiatoana dia misy fiantraikany eo amin'ny tsangantsangan'ny akanjo maivana maivana. Ny dingana lehibe dia aseho amin'ny silhouette amin'ny ankapobeny, ary ny fanapahan-kevitry ny akanjo marevaka marevaka misy tavy ambony.
Asymmetry . Ny tsipaipaikao tsy mety ataon'ny olona dia hahasarika foana ny saina. Indrindra indrindra ny modely asymmetrika manan-danja dia heverina ho an'ny fanao amam-borona miaraka amin'ny tarehimarika maromaro kokoa , ho fomba iray handrafetana amin'ny faritra tsy misy ahiahy.
Akanjo miloko marevaka vita amin'ny velvet . Ny zava-baovao amin'ity vanim-potoana ity dia ny vokatra amin'ny fitaovana mahavariana miaraka amin'ny lolo mum. Ny akanjo vita amin'ny velvet dia vita amin'ny halavan'ny maxi sy midi, izay manantona indray ny hakantony sy ny vehivavy eo amin'ny sary.
Mackintosh ny akanjo miloko mena . Ny modely maimaimpoana trapezoidal dia mitoetra ao anatin'ity taona ity ihany koa. Ny endrika modely Macon dia manerantany amin'ny endrika karazana rehetra ary tonga lafatra amin'ny socks mavitrika isan'andro.
Ny endriky ny renirano . Raha mitady vahaolana iray ianao izay mampiavaka ny maha-tokana anao sy ny fomba amam-panao azy, mitandrema amin'ny fomba amam-panao lamaody na lamaody miaraka amin'ny antsipirihany amin'ny an-damosiny.
Tsy misy fasteners . Fombafomba maoderina amin'ny modely vy amin'ny fofona. Ny akanjo lamaody toy izany dia azo atao tsy misaraka na mifatotra amin'ny rongony, manasongadina ny tavy. Ny safidy tsy misy fifadian-kanina dia manan-danja amin'ny fohy fohy.
Toe-draharahan-damba mirindra amin'ny vehivavy
Zava-dehibe amin'ny famolavolana fitafiana lamaody ny fanangonany. Ity taona ity amin'ny lamaody dia vahaolana mandresy amin'ny fandrosoana - ny mainty sy ny fotsy. Io safidy io dia manerantany ho an'ny tsipìkany mamirapiratra sy mihazona, mahasoa ho an'ny tsipìkan'ny tsikirikirioka mafy sy mivonto. Na izany aza, raha mifidy modely ianao izay hanampy anao hisaraka amin'ireo hafa, dia mendrika ny mipetraka amin'ny loko mamirapiratra, mampiavaka ny antsipiriany amin'ny sary. Andeha hojerentsika ny endriky ny lamaody 2018 natolotr'ireo fanangonana farany:
Red shades . Amin'ny vanim-potoana vaovao amin'ny fironana rehetra dia ny alokaloky ny palette vehivavy. Ho an'ny mpankafy ny tsipìkan'ny kanto sy marefo dia tsara kokoa ny mijanona amin'ny tonony tsy mitongilana - marsala, divay. Ny hafanana sy ny hainandro eo amin'ny sary dia manampy loko marevaka - salmon, coral.
Palette feno feno . Ny vahaolana hafa entina hanatsarana ny endriky ny kilasy dia vahaolana volo. Ao amin'ireo fanangonana vaovao, ireo mpanamboatra dia nanolotra modely amin'ny loko kafe mainty sy ny ivoho ivoho .
Oliva sy emeralda . Ny safidy lamaody amin'ny fotoanan'ny lohataona ho avy dia ho palette maitso. Maivana sy maivana kokoa ny loko oliva maivana sy ny aloky ny alokaloka matevina.
Prints . Mba hanamafisana mivantana ny akanjo ivelany, misafidy ny sary hosodoko sy ny abstractions. Ny tena mahazatra dia ny voninkazo, ny geometry, ny taratra, ny ankizy sy ny literatiora.
Ny vokatra vita amin'ny hoditra dia mbola mahasoa sy mahomby indrindra. Manome toro-hevitra ny mpanolo-tsaina ny manolotra ny fitaovana voajanahary. Na izany aza, eo amin'ny tsena maoderina dia misy ihany koa lamaody lamaody avy amin'ny mpanolo-tsaina kalitao. Ny safidy manintona, izay manantitrantitra ny maha-vehivavy sy ny hakantony amin'ny karazany rehetra , dia nanjary akanjo lava vita amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny silhouette. Ao amin'ny loha-hevitra dia mbola mazàna ny fomba fanoroana mivantana ny bokotra na zippers. Mandritra ny fironana, ny matromatika vita amin'ny matrices sy varnished, modely mody eo ambanin'ny hoditry ny biby mandady, ny kofehy matevina.
Ny akanjon'ny vehivavy amin'ny kapa
Ireo karazana, miaraka amin'ny fitaovana iray miaro ny lohan-doha, dia tsy milamina mandritra ny fizaran-taona maromaro. Ny fisian'ny kapila dia manome fiarovana tanteraka amin'ny rivotra ary miankina amin'ny orana. Ao amin'ireo fanangonana vaovao, ireo mpanamboatra dia nanolotra akanjo feno tsipiriany ho lohan-tserasera malalaka sy lalina. Io endri-javatra io dia ahafahanao manao volo avo lenta ary raha ilaina dia mitafy kapa. Safidy azo antoka ho an'ny andro tsirairay dia akanjom-behivavy beige na mainty. Na izany aza, ireo modely misy kapoaka dia aseho amin'ny lolo marevaka, sy sprints, ary amin'ny endrika mangarahara.
Ny volo manjelatra amin'ny vehivavy
Raha mitady akanjo izay tanjona voalohany dia ny miaro azy ireo amin'ny orana, mandinika ireo modelin'ny polyethylene. Aza manahy fa hanimba ny endrik'ilay lamaody toy izany ianao. Androany, manamboatra vahaolana mahaliana sy niavaka ny mpahaikanto, na amin'ny endrika mangarahara, na amin'ny loko. Ny akanjom-behivavy demi-season dia malaza amin'ny famotsoran-keloka maimaim-poana sy A, ary koa amin'ny fehikibo. Safidy hafa ho an'ny polyethylene dia plashevka. Ny vokatra mitroka dia manintona amin'ny loko metaly ho an'ny volamena, volafotsy, varahina, siramamy.
Ny akanjo mody vita amin'ny denim dia heverina ho betsaka kokoa noho ny sary. Ity safidy ity dia tsy azo ampiharina amin'ny toetry ny orana sy ny hafanana. Na izany aza, ireo satroka matevina dia miaro amin'ny fiarovana amin'ny rivotra. Ny oran-dohataona amin'ny lohataona dia aseho amin'ny sary amin'ny manga manga nentim-paharazana, sy ny loko manga manga, miaraka amin'ny vokatra "varenki", tetezamita gradient. Ny lamaody maoderina dia ny halavan'ny lohalika sy ny silhouette-trapezoid. Ny vokatra maoderina vaovao amin'ny vanim-potoana dia ny modely faran'izay tsara amin'ny lehilahy. Ity singa ao amin'ny gardro ity dia samy hafa amin'ny fitenenana mivantana, maranitra mafy, akanjo marevaka.
Ny fironana amin'ny teny Anglisy dia mijanona ho firoborobo. Ny lamosin'ny lamosina amin'ny lamaody dia manana halava midi-maso iraisam-pirenena. Ny tendron'ity vokatra ity dia mendrika foana ary ampitomboina amin'ny angom-bary. Ny akanjon'ireo akanjo dia mahazatra, ary ny taova dia nasongadina amin'ny fehikibo madio. Ny akanjo fotsy dia vita amin'ny orana. Ny loko voajanahary sy mainty hoditra dia heverina ho nentim-paharazana. Na izany aza, vao haingana dia lasa zava-dehibe kokoa ny vahaolana loko maitso. Ny endri-javatra miavaka amin'ny vokatra toy izany dia ny fanakatonana bokotra avo roa heny.
Ity fomba amam-panao lamaody lamaody matetika dia misafotofoto amin'ny tranokala anglisy. Na izany aza dia zava-dehibe ny mahafantatra ireo fahasamihafana lehibe izay manimba ny tsironao. Ny akanjom-behivavy mahazatra dia afaka mahazo takaitra amin'ny lafiny iray na roa, na tsy azo hamaivana amin'ny fanampiana amin'ny fitaovana, fa ny fehikibo amin'ny rongony ihany. Ny akanjo mody dia aseho amin'ny endrika silhouette mahitsy sy A, saingy tsy misy fitongilana. Tsy toy ny akanjo lava amin'ny fikorianan'ny jaketa, mety misy volom-borona, fehikibo madio na famolavolana tany am-piandohana.
Modely mafana dia hamonjy anao amin'ny hatsiaka amin'ny lohataona. Ireo fitaovana manandanja ho an'ny faniriana akanjo toy izany dia plashevka, bologna ary kiraro. Ny ankamaroan'ny vokatra vita amin'ny hoditra dia ampitomboina amin'ny heaterina. Ny fanohanana amin'ity tranga ity dia ny volon'ondry, ny bisikileta mena na ny fandrefesana sintepon matevina, nohosaina eo ambanin'ny fantsona tsy misy. Ny lamaody modely ho an'ny akanjo mavitrika isan'andro dia ny akanjon'ny vehivavy. Ny modely toy izany dia aseho amin'ny famolavolan'ny valan-javaboary iray na ny làlam-pahefana mivantana miaraka amin'ny paosy miafina. Ny akanjon'akanjo vita amin'ny tsena malaza dia manerantany ho an'ny taona rehetra.
Amin'ny inona ny manao ny akanjon'ny vehivavy?
Ity karazana lambondriaka lamaody amin'ny vanin-taona faramparany ity dia lasa mora kokoa amin'ny fisafidianana ireo tsipika sisa amin'ny sary. Ho an'ny tsipika henjana sy tsenam-barotra mahazatra dia ny kiraro mahazatra miaraka amin'ny vody, pensilihazo pensilihazo na pataloha miaraka amin'ny zana-tsipìkany, kitapo hoditra marevaka sy satroka kanto. Ny akanjo miloko fanao amam-behivavy vita amin'ny denim, hoditra, plaschevki mifangaro tanteraka amin'ny kiraro, jeans ary ny kitapom-borona. Ny endriky ny vehivavy dia mifanaraka tanteraka amin'ny endriky ny endrika silhouette napetraka ao anatin'ilay antokon'olom-bitsy miaraka amin'ny kiraro madio amin'ny kirany na ny kofehy ary ny moka amin'ny tendany.
Vehivavy kelin'ny vehivavy
Ny modely dia heverina ho fohy eo afovoan'ny feny. Ny akanjo toy izany dia aseho matetika amin'ny silhoueta havanana, mba hahafahana misintona ny loaka sy miaraka amin'ny fehikibo. Ny vahaolana maoderina ho an'ny modely fohy dia ny safidin'ny kiraro avo loha - boots, boots-stockings. Amin'ny toetr'andro mafana dia afaka manao boots na kiraro madio ianao. Ny akanjo marevaka malefaka dia mijery tsara amin'ny elatra misy elatra na tery. Ny fampiofanana vehivavy dia azo ampitaina amin'ny akanjo mifanohitra aminy ao amin'ny gorodona na amin'ny akanjo maotina izay latsaky ny dimy santimetatra eo ambanin'ny elatry ny fitafiana ivelany.
Vehivavy lava be
Ny halaviran-dalitra dia mihaingo ny ankizivavy avo be. Raha manana mofomamy kely ianao dia misafidy akanjo loko manga - volo bejiana vavy, vahaolana pastel ary loko fotsy. Ny ankizivavy feno dia tokony hanao loko maizina. Ny akanjom-behivavy malaza lava no ho ny tsipiriany lehibe amin'ny sary. Noho izany, tsy maintsy ampiana amin'ny antsipiriany izany. Modely mivantana sy maimaim-poana no mijery tsara ny kitapo Kazehal sy ny fanatanjahan-tena. Ny modely amina modely iray sy A dia tsara kokoa amin'ny fanamafisam-peo amin'ny kiraro mahazatra amin'ny kofehy na kofehy, satroka am-pitiavana, kitapo kely na môtô.
Sarin'ny anjely iray ho an'ny sary fitifirana
Fotoam-pivoriana fotoam-pandresena amin'ny fahagagana iray
Photoshoot eny an-kianja
Sary fanao isan'andro
Fitaratra an-dranomasina amin'ny akanjo
Ny akanjon'ny firenena Okrainiana
Fomba fanao amin'ny ankizivavy 2013
Fashion 2017 ho an'ny vehivavy 45 taona mahery - akanjo maotina, lamaody lamaody
Nahoana isika no manonofy ratsy?
Nahoana ianao no tsy te hanao firaisana?
Ginkgo biloba - fifanoherana
Apetisialy feno akanjo
Soup miaraka amin'ny dumplings amin'ny akoho boakazo - fomba tsara indrindra isan'andro ho an'ny fianakaviana manontolo
Sakafo 18 miaraka amin'ny fitaovana tsy mampiavaka
Gymnastics ho an'ny maso mba hanatsarana ny fahitana
Anarana ho an'ny kisoa karana
Fetin'ny britanika britanika
Johnny Depp sy Amber Heard